एक कम्पनीहरु को शामिल शेल्फ कम्पनी के हो?
शेल्फ कम्पनीको प्रकार के हो?
कुन शेल्फ कम्पनीको आयु मेरो लागि सही छ? शेल्फ कम्पनीको आयु के हो?
अतिरिक्त शेल्फ कम्पनीको लाभ?
शेल कम्पनी वा कर्पोरेट के हो?
अतिरिक्त वेबसाइट खण्ड र जानकारी
एक शेल्फ कम्पनी एक LLC वा निगम हो जुन पहिले नै स्थापित भएको छ
मिति। सामान्यतया, यो व्यवसाय सञ्चालन हुनेछैन। यसले समात्न सक्दैन
सम्पत्तिहरू, दायित्व नाघेको छैन र स्टक जारी गर्न अझैसम्म छ। यी
निगमहरु लाई पनि अनुभवी शेल्फ कम्पनीहरु को रूप मा जाना जाता छ। कहिले
तपाईं एक कम्पनी को आयु वर्ग शेल्फ कम्पनी शामिल हो, यो हुनेछ
समावेश नगरिएको फाइलको लेखको साथ तपाईंको स्वामित्वमा आइपुगेको छ
सरकार द्वारा यसको समावेश मिति संग साथै:
"पूर्ण इन्टरपोर्टरको कार्य" कागजात जसले कम्पनीलाई स्थानान्तरण गर्दछ
सभाहरूको मिनेट (खाली नमूना फारामहरू)
एक कर्पोरेट किट (रेकर्ड बुक)
स्टक प्रमाणपत्रहरू (रिक्त, अन-जारी गरिएका शेयरहरू)
एक कर्पोरेट मुहर
कर्पोरेट वेल्स (अज्ञात रूपहरु)
एक कम्पनीले चेकलिस्टलाई तपाईंको कम्पनी राख्नको लागी तपाईलाई थाहा छ
महत्वपूर्ण फारमहरू संग एक सीडी
संघीय कर आईडी नम्बर
अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू
फिर्ता शेल्फ कार्पोरेशन
उमेरका शेल्फ निगमको प्रकार के हो?
शेल्फ र वृद्ध कम्पनीहरूले विभिन्न प्रकारका कानुनी संस्थाहरूलाई सन्दर्भ गर्न सक्छन्। यो
यूएस घरेलू निगमहरू र LLC समावेश छन्, साथसाथै अपतटीय र
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू। शब्द "शेल्फ" वा "वृद्ध" मात्र उल्लेख गर्दछ
वास्तवमा यो कम्पनी पहिले नै दावी गरिएको छ र "मा एक
शेल्फ "खरिद गर्न पर्खँदै।
शेल्फ कम्पनीमा फर्कनुहोस्
कुन शेल्फ कम्पनीको आयु मेरो लागि सही छ?
तपाईंको आवश्यकताहरूको लागि उपयुक्त उमेर छान्नु महत्त्वपूर्ण छ। तेसका लागि
भवन ठेकेदार वा परामर्श कम्पनी निर्माणको वर्षमा
अस्तित्व ग्राहकहरूलाई महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं 15 वर्षको लागि निर्माण उद्योगमा हुनुहुन्छ भने, उदाहरणको लागि, एक 15-वर्षीय निगम प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ किनभने यसले तपाईंको समयमा व्यापारको साथ मेल खान्छ। केही ठेगहरू प्राप्त गर्न, सामान्य व्यावसायिक आयु आवश्यकता दुई वर्ष हो। त्यो बिडिंग सम्झौता प्राप्त गर्न एक मात्र कारक नहुन सक्छ, तर यो धेरै चेक-बक्स वस्तुहरू मध्ये एक हुन सक्छ, विशेष गरी, जस्तै हामीले उल्लेख गर्यौं, जब तपाईंको कर्पोरेट युग र बिजनेस युग एकजुट हुन्छ। यसबाहेक, केही रिपोर्टको लागि
व्यवसाय जसले कर्पोरेट क्रेडिट निर्माण गर्न चाहन्छ, पुरानो पुरानो। यो हुन सक्छ वा धेरै पनि यो मामला छैन, तर त्यहाँ अन्य कारकहरू छन् जुन सम्भावना र व्यापारको लाभको रूपमा अधिक वजन हुन सक्छ। पूर्ण प्रकटीकरण सिफारिश गरिएको छ। मुख्य समस्याहरु संभावित ग्राहकहरु को धारणा हुन् र
सम्भावित उधारदायीहरू। व्यवसायलाई कसरी पक्का गर्न सकिन्छ?
ग्राहक वा बैंकर जसले व्यवसाय सुरक्षित र स्थिर छ? उमेर छ
तपाईंको व्यवसाय महत्त्वपूर्ण छ? यो सामान्यतया एक ग्राहक वा ऋणदाता हो। हामी यो उमेर मात्र एक मात्र कारक हो भनेर भन्न सक्दैनौं, तर अन्य महत्त्वपूर्ण कारकहरू यसको अलावा, मापनको साइडमा यसले कम वजन राख्न सक्दछ।
शेल्फ कम्पनीको उमेर के हो?
शेल्फ निगमको उमेर भनेको मानवको उमेरको रूपमा हो
हुनु। कानूनले निगमलाई एक व्यक्तिलाई बोलाउँछ। यो एक कृत्रिम हो
व्यक्ति। यो यसको स्वामित्व गर्ने मानिसहरूबाट अलग छ। एक मालिक
शेल्फ कर्पोरेट, कुनै अन्य कानूनी इकाई जस्तै, बस को रूप मा अलग हो
एक अर्काबाट दुई व्यक्तिहरू अलग छन्। एच जे हेन्जज कम्पनी
1869 मा सुरू भयो। मूल मालिकहरू, अधिकारीहरू र निर्देशकहरू लामो छन्
पछि बित्यो। तथापि, कम्पनीको उमेर साँच्चै बनी रहन्छ
शेल्फ निगम लाभहरू
तुरुन्त उपलब्धता - कम्पनी गठन गरिएको छ कि तैयार छ
सरकारको लागि पर्खनु आवश्यक पर्दैन भन्दा सट्टा डिलीवरीको लागि
ग्राहकहरूको लागि सम्भावना (यो राम्रो काम गर्दछ, हाम्रो रायमा, जब तपाईंको वास्तविक समय व्यवसायमा कम्पनीको उमेरसँग मेल खान्छ।)
अनुबंधमा बोल्ने सम्भावित क्षमता। धेरै बोलपत्रहरू अनुबंध चाहिन्छ कि व्यवसाय दुई र पाँचको बीचमा हुन्छ
वर्ष। यसले राम्रो काम गर्दछ जब तपाईंको वास्तविक समय व्यवसायमा कम्पनीको उमेरसँग मेल खान्छ।
क्रेडिटमा छिटो पहुँच (किनकी कम्पनी तेर्सो हातमा पुग्छ)
उद्यम पूंजी प्राप्त गर्न छिटो (किनकि कम्पनी तेर्सो हातमा पुग्छ)
कम्पनी "सार्वजनिक" लिने तीव्र र स्टकमा शेयरहरू बेच्न
यदि निश्चित मापदण्ड पूरा भएमा आदान प्रदान गर्न सक्दछ, जस्तै उचित स्थिति र संघीय फाइलिंग।
तपाईंको कम्पनी को शामिल गर्न कम नेतृत्व समय
उम्मेद्वारमा एक क्षेत्रमा तपाईंको व्यवसाय बोल्ने वा पेश गर्ने क्षमता बढाउन सक्छ
कम्पनीको लागि अस्तित्व अवधि थ्रेशोल्ड ब्रेक हुनु पर्छ
अनुबंधीय पालन (पूर्ण प्रकटीकरण अनुशंसित)
तुरुन्तै लामो समयसम्म दायर गर्ने कम्पनीको साथ लिइन्छ
छिटो पहुँच व्यापार अवसरहरू
उपरोक्त फाइदाहरू हाम्रो रायमा आधारित हुन्छन् र तपाईंको स्थितिमा लागू हुन सक्दैन। खरिदका खरिद कम्पनीहरु नयाँ छ भन्दा केहि ठूलो फाइदा छन्
दावी व्यवसायहरू। पहिलो, माथि उल्लेखित लाभहरू। त्यसपछि,
को लाभ एक स्थापित निगम को खरीद गर्न को लागि र अझै सम्म
आफैले अधिकारीहरू, निर्देशकहरू र शेयरधारकहरूको रूपमा राखे, तिनीहरूलाई दिँदै
व्यवसायको द्रुत नियन्त्रण। हामी पूर्ण प्रकटीकरण को सिफारिश गर्छन कि तपाईं उधारदाताओं र अन्य दलों को सूचित गर्नुहोस जुन तपाईंले हाल मा एक इकाई प्राप्त गरेको छ।
शेल निगम वा कर्पोरेट खोल के हो?
कर्पोरेट गोला "शेल्फ कम्पनीहरू" हुन् जुन तिनीहरू जान्छन्, कि
पनि कम्पनीहरू पहिले नै बनाइएका छन्। यी प्रकारका
कम्पनीहरू प्राय: शेयरधारकहरू, अधिकारीहरू वा निर्देशकहरू छैनन्
(राम्रो ख्याल राख्ने लागि दायर गर्न आवश्यक छैन)। तिनीहरू सामान्यतया
कुनै सम्पत्ति वा देनदारता छैन। यस्तो इकाई एक नयाँसँग अनुरूप छ
घर निर्माण गरिएको छ र तपाईलाई कब्जा गर्न तयार छ।